Ngwaahịa na ọnọdụ nke ụlọ nkwakọba ihe Amazon na Spain | ECommerce ozi ọma
Amazon Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụghịkwa ihe ijuanya, ebe ọ bụ na ọrụ ọ na-enye na-agbakwunye nnukwu uru na ngwaahịa ndị ọ na-ere. Mana eziokwu na ọ dị nfe maka onye njedebe ikpeazụ ile ngwaahịa ndị ahụ anya na ihu kọmputa, wee nwee ike itinye iwu, pụtara nnukwu ọchịchọ maka ngwa ọrụ.
Iji mezuo mkpa a, Amazon na Spain na-eji usoro nke ụlọ nkwakọba ihe ndị a na-ekesa n'ụzọ dị mkpa iji nwee ike ijikwa nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa ndị ahụ ma mee ka mbupu ahụ ga-adị n'aka onye ahịa ikpeazụ n'ime oge 2 ruo ụbọchị 5. MaEbee ka ụlọ nkwakọba ihe Amazon ndị a dị na Spen na olee otu ọrụ ọrụ ha si arụ ọrụ??
1 Ebee ka ụlọ nkwakọba ihe Amazon dị na Spain?
1.1 Leslọ nkwakọba ihe Illescas
1.2 Lọ nkwakọba ihe Getafe
1.3 Ogige Madrid
1.5 Ebe atọ na Martilles
2 Ọrụ nke lọjistik nke ụlọ nkwakọba ihe Amazon na Spain
2.1 Ọrụ Robot
3 Emezu site n'ụlọ nkwakọba ihe Amazon dị maka onye ọ bụla
3.1 Uru nke lọjistik Amazon
Ebee ka ụlọ nkwakọba ihe Amazon dị na Spain?
Leslọ nkwakọba ihe Illescas
Ka anyị bido ikwu gbasara ya ụlọ nkwakọba ihe dị na Illescas, na San Fernando de Henares, ebe otu n’ime ebe dị mkpa na lọjistik dị na Spen dị. Lọ nkwakọba ihe a bụ ihe nganga maka Amazonebe ọ bụ na ọ nwere ikike ijikwa iwu 182 naanị n'ime awa 000, ọrụ siri ike maka lọjistik. Onu ogugu a bu akwukwo nke Amazon.com n'onwe ya, nke gosiputara na ubochi nke kachasi ahia bu December 24.
Lọ nkwakọba ihe Getafe
Ọzọ nke ụlọ nkwakọba ihe nke Amazon nwere na Spain dị na Getafe, na ọ nọ n'ọnọdụ dị mma iji nwee ike mejupụta ọchịchọ nke mpaghara etiti Spain. Otú ọ dị, n'ihi Amazon mmeba atụmatụ, a abụọ lọjistik center a ga-arụnyere na otu mpaghara, ke Polygon nke Gavilanes.
Ọzọ nke Lọ nkwakọba ihe Amazon na Spain Ọ dị na Madrid, emebere ya iji mejupụta ngwa ngwa nke mpaghara mepere emepe. Isi ọrụ ya bụ inwe ike ịnapụta ngwaahịa ndị ewu ewu na mpaghara ahụ ngwa ngwa. Mana ọ bụghị naanị ụlọ ahịa nke ụdị ya na Spain, ụlọ ahịa ọzọ emere ọrụ ndị ahịa ngwa ngwa bụ nke dị na Barcelona.
Ebe ọzọ lọjistik dị na nso Barcelona bụ nke Prat de Llobregat, ụlọ nkwakọba ihe nke dị nso na ọdụ ụgbọ elu Barcelona, ​​ọ bụ ya mere o ji bụrụ ebe dị mma iji nwee ike ịga iwu nke ga-abata na ụgbọ elu. Uzo ozo di iche iche nke ulo ahia a bu na o nwere nkà na ụzụ robotic nke ukwuu.
Ebe atọ na Martilles
ndị ọzọ 3 lọjistik emmepe ndị dị mkpa ikwu bụ hama, nke isi ihe ya na-arụrụ onwe ya. Ihe na-esote bụ Castellbisbal, nke bụ ụlọ ọrụ lọjistik mepere ụzọ ya na 2016. N’ikpeazụ, anyị ga-ekwu maka Seville, ebe a na-agbakọ lọjistik nke isi obodo Andalusia, e wee wuo ụlọ nkwakọba ihe a kpọmkwem maka ijere obodo a ozi.
Ọrụ nke lọjistik nke ụlọ nkwakọba ihe Amazon na Spain
Na-ekwu maka otu ụbọchị nwere nnukwu ọchịchọ maka ngwaahịa site Amazon, usoro ntanetị na-ejikwa ihe dị ka iwu 35 kwa nkeji. Nke pụtara na enwere ọtụtụ ọrụ ị ga-eme iji hụ na ngwugwu ahụ ruru onye ahịa ahụ n'ụzọ juru afọ. Na akụkụ nke ihe ịga nke ọma nke amazon lọjistik achọtara ya na akpaaka nke usoro dị iche iche.
Isi tiori n'okpuru nke ọ na-zubere Ngwa ngwa Amazon bụ nke ọgba aghara a haziri ahazi, ebumnuche na-agwa anyị na ọ dịghị mkpa ka a hazie isiokwu ndị ahụ nke na ihe niile yiri ya nọ n'otu ọnọdụ.
Kama, ndị ọrụ mgbanaka na-ahụ maka ịhazi iwu site na iji algorithms na nke ebumnuche bụ na ngwaahịa ga-adị n'ọnọdụ nnweta. Uru mbụ nke ụdị ụlọ nkwakọba ihe a na-eweta bụ na ohere nke ịgbagha ngwaahịa ahụ pere mpe, ebe ọ bụ na ngwaahịa ndị yiri ya anaghị agba ya gburugburu, mana dị iche iche.
Ọzọ uru na usoro lọjistik Usoro a na-akpaghị aka bụ na ndị robots bụ ọrụ maka ibufe ngwaahịa ahụ site na ebe nchekwa ya n'aka onye ọrụ na-ahụ maka ịkwakọ ngwaahịa ahụ, usoro a na-akpaghị aka na-echekwa ihe dịka njem 1,2 nke onye ọrụ ọ bụla, nke a ga-eji naanị maka inwe ike ịchọta ebe ngwaahịa ahụ dị.
Isi okwu bụ na maka ọgba aghara a nyere iwu ka ọ dịrị, sọftụwia ahụ nwere sistemu geolocation na nkpado, nke na-enye ohere ịmara kpọmkwem ọnọdụ nke ngwaahịa ọ bụla dị iche iche n'ime ụlọ nkwakọba ihe. Nke a na-enyekwa ya ohere ịmara mgbe otu n'ime ngwaahịa ndị a na-agagharị, ma si otú a na-agbaso trajectory nke ngwaahịa a.
Ọ bụ ezie na ọ bụ onye ọrụ mmadụ na-ekpebi ebe a ga-etinye ngwaahịa ndị ọhụrụ na-abata n'ụlọ nkwakọba ihe, a ga-egosi ọkwa ọhụrụ a na robot i scanomi koodu ngwaahịa na ebe N'ime ya. N'ụzọ dị otú a, mgbe anyị nyere iwu maka ngwaahịa ahụ, robot ga-enwe ike ịnapụta ya na enweghị nsogbu ọ bụla.
Ugbu a, ozugbo etinyela ngwaahịa ahụ n'ebe a na-eji ya eme ihe, onye ọrụ mmadụ ga-ahụ maka ịkwakọ ngwaahịa ahụ. Nke a pụtara na ngwugwu ahụ adịla njikere ugbu a ibupu. Ugbu a, a na-etinye ya na eriri ebu ebe ndị ọzọ na-akpachapụ aka na-elekọta hazie nchịkọta dị iche iche dịka ịdị arọ ha, nha na njirimara ndị ọzọ, iji nwee ike ịkọwa ha site na ụlọ ọrụ ngwugwu nke ga-ahụ maka iwere ngwaahịa ahụ na onye ọrụ njedebe.
Emezu site n'ụlọ nkwakọba ihe Amazon dị maka onye ọ bụla
Otu n’ime isiokwu kachasị masị ndị niile chọrọ ree ngwaahịa gị n'elu ikpo okwu Amazon, bụ na Amazon nwere ọnụ ụzọ nke ụlọ nkwakọba ihe ya. N'ihi nke a ọ bụla ndị na-ere ere nwere ike ịdebanye aha maka ngwa ngwa Amazon yabụ ị nwere ike izipu ngwaahịa gị n'ụlọ nkwakọba ihe ha, nke mere na mgbe a natara iwu maka ngwaahịa a, ebugara ya ozugbo iji Ọrụ lọjistik Amazon.
Eziokwu ahụ bụ na Amazon na-elekọta njikwa nnyefe nke ngwaahịa na-enye ọtụtụ uru, n'etiti ha na onye ahịa ga-enweta nlezianya anya nke otu n'ime ụlọ ọrụ kwadebere ma kwadebere nke ọma na ụwa.
Uru nke lọjistik Amazon
Uru ọzọ ị na-eme eji ngwa ngwa Amazon bụ na ị nwere ike ịnweta baajị atọ nke ga - eme ka ndị ahịa họrọ ngwaahịa nke ụlọ ahịa gị, n'ihi na ekele maka baajị nke Prime, Kwadoro site na Amazon na Boxzụta Igbe, ndị ahịa ga-enwe mmasị ịzụta ngwaahịa gị.
Ọzọ bụ isi uru nke iji ihe ndị a eme ihe Ọrụ lọjistik Amazon, bụ na, site n'enyefe lọjistik, ị nwere ike ilekwasị anya na arụmọrụ ndị ọzọ nke azụmahịa gị, na-atụkwasị obi na lọjistik dị n'aka aka. Na mgbakwunye na ịnye ọrụ ka mma nye onye ahịa ikpeazụ, Amazon ga-ejikwa ọrụ ndị ahịa.
Dị ka uru ikpeazụ nke iji usoro lọjistik nke ya na Lọ nkwakọba ihe Amazon na Spain bụ na e nwere ụdị mgbanwe ịkwụ ụgwọ. Nke a pụtara na Amazon na-emegharị ka mkpa gị dị ka onye na-ere ere, nke mere na enweghị ụgwọ ndenye aha, ma ọ bụ ụdị nkwekọrịta ọ bụla na-eme gị ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ. Kama nke ahụ, a na-akwụ ya ụgwọ dịka ọrụ njikwa ọrụ eji.
Ihe niile a dị n’elu na-egosi anyị ihe kpatara ya Amazon bụ otu n'ime ụlọ ahịa n'ịntanetị kasị ukwuu n'ụwa, Ebe ọ bụ na nkà ihe ọmụma na ụlọ ọrụ na-enye anyị ohere ịnye ọtụtụ ihe n'oge dị mkpirikpi, ọ bụ ezie na itinye ego na mmepe ejirila ogologo oge, ọ ga-abụrịrị obere obi abụọ kwesịrị ya, na ekele maka nke a na ndị ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ ihe niile ngwaahịa anyị nwere ike iche n'echiche., Na ihe niile n'ọnụ ụzọ ụlọ anyị na nkasi obi nke ebe obibi anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Lọ nkwakọba ihe Amazon na Spain
Amaghị m ma ọ bụrụ na m na-ede na nri ebe….
N'ụtụtụ a (21.10.2019) na 13.39 e nyefere m ngwugwu m na «onye agbata obi» Rubén Locutorio n'ala 7… Amaghị m onye agbataobi ahụ bụ na onye nyere gị ikike iji nyefee ngwugwu MY na onye agbata obi ».
Nọmba ịtụ EA0010726018.
Okwu m adighi afọ ojuju maka gị. Enwere m iwe na maka ọrụ ọjọọ nke ndị na-enyefe ha. Gịnị mere e ji nye nọmba ekwentị ahụ, ha anọwo ụbọchị niile na-ahapụghị ichere ngwugwu ahụ. Ugbu a ị nwere ike ịga chọta Ruben….
Zaghachi Pilar Guimera Benito